किन चल्यो निक र प्रियंकाको सम्बन्धविच्छेदको हल्ला ? | Ratopati
बलिउड अभिनेत्री प्रियंका चोपडा र उनका पति निक जोनसको सम्बन्धविच्छेदको विषयमा छापिएका समाचारहरुले चर्चा पाएका छन् । प्रियंका चोपडाले आफ्नो इन्स्टाग्राम अकाउन्टबाट पतिको थर हटाएपछि उनीहरुको सम्बन्धविच्छेदको चर्चा चलेको हो । उक्त विषयलाई लिएर उनीहरु सम्बन्धविच्छेद त गर्दै छैनन् ? भन्ने विषयमा चर्चा भइरहेको छ । यसैबीच, निकले आफ्नो एउटा भिडियो सार्वजनिक गरेका छन् । उनले फिटनेस भिडियोमा डबल्स उठाइरहेका छन् ।
‘पीके’मा सुशान्तको पारिश्रमिक २१ रुपैयाँ !